YHT အဓိကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆောက်အအုံများ TCDD Taşımacılık A.Ş. Yht စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန 2019/595431 GCC ၏ခန့်မှန်းခြေတန်ဖိုးမှာ ၃၆၉.၇၅၄,369.754,00 TL YHT ပင်မပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနလေအေးပေးစက် ၀ န်ဆောင်မှု [ပို ... ]
Konya YHT ဘူတာရုံအတွက်လေလံအသစ်
Konya YHT ဘူတာအသစ်အတွက်တင်ဒါအသစ်၊ 2017 ကိုအောက်တိုဘာလတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ [ပို ... ]
armKUR မှ Marmaray စက်ယန္တရားများ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan, Gebze-Halkalı 245 ကို URKUR မှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ SözcüAli Ekber Ertürk၏သတင်းအရ; အလုပ်ခွင်ဆိုင်ရာစက်ပြင်သင်တန်းများ [ပို ... ]
Kemal Demirel ၏ကဗျာဆန်မီးရထားပြပွဲ
Kemal Demirel မှကဗျာဆန်မီးရထားပြပွဲ၊ Kemal Demirel သည် Bursa တွင်လေ့ကျင့်ရန်စိတ်ထဲရောက်လာသည့်ပထမဆုံးနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သည်။2ကာလတွင် CHP Bursa လက်ထောက်ဖြစ်ခဲ့သူ Demirel သည်တစ်နိုင်ငံလုံးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ပြီးနောက်သူသည်ကဗျာနှင့်တေးဂီတကိုအားပေးခဲ့သည်။ အခုတော့ကွဲပြားသွားပြီ [ပို ... ]
TCDD သည် Bursa ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာနတစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မည်
…ဆွေးနွေးပွဲများတွင်တာဝန်ရှိသူများသည် Bursa ရထားလမ်းအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားကို ဆက်လက်၍ အလေးအနက်ထားကြသည်။ သို့သော်စီမံကိန်းအမျိုးအစားတွင်အဆင့်မြင့်ရထားလမ်းစီမံကိန်းရှိသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ခရီးသည်နှင့်ကုန်တင်ရထားနှစ်ခုစလုံးအတွက်ရထားလမ်းတစ်ခုတည်းတွင်မျဉ်းတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ [ပို ... ]
FedEx Express ကိုပိုမြန်လာတူရကီအတွက်ကုမ္ပဏီမှစတင်သည်န်ဆောင်မှုများပေး
ပိုပြီးတိုက်ရိုက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှတူရကီအတွက်ဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်စကားဥရောပတစ်လွှားနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ FedEx ကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: FDX) နှင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအမြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ FedEx ။ [ပို ... ]
ရထား Pristina အတွက်တ ဦး တည်းဒဏ်ရာရ
ညနေ ၈ နာရီခန့်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အနီး Pristina dün Adem Jashari” ရထားပေါ်တွင်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒီမတော်တဆမှုကြောင့်လူတစ်ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ လေကြောင်းမတော်တဆမှုနှင့်အဖြစ်အပျက်များသုတေသန [ပို ... ]
တူရကီအတွက်တစ်ဦးကပထမဦးစွာ! .. မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေ Path ကိုစမတ်လာ
တူရကီအတွက်တစ်ဦးကပထမဦးစွာ .. မြေထဲ Coastal အဝေးပြေးစမတ်လာ!; ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Mehmet Cahit Turhan ကပြောကြားရာတွင် Smart Road Pilot Application အနေဖြင့်စတင်ခဲ့သည့်မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းလမ်း၏ကီလိုမီတာ ၅၀၅ တွင်ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူးတည်ဆောက်မှုပြီးစီးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
အစိုးရအိမ်နှင့် Clover လမ်းဆုံတို့တွင်လမ်းကြောများဖွင့်ခြင်းဖြင့်Balıkesir Metropolitan မြို့တော်ဝန်YücelYılmaz၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်လမ်းချဲ့ထွင်ခြင်းများကြောင့်၊ Smart လမ်းဆုံစနစ်မှရရှိသောအချက်အလက်များအရBalıkesirရှိယာဉ်အသွားအလာရာခိုင်နှုန်းသည် [ပို ... ]
Antalya Tram ကားဝယ်ယူမှုတင်ဒါရလဒ်
တင်ဒါခေါ်ယူမှုအရ Antalya မြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ရထားလမ်းစနစ်၏ဈေးနှုန်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်များပါသည်။ [ပို ... ]
EGO ဘတ်စ်ကားညှိနှိုင်းမှုဝယ်ယူရန်အကြွေးတောင်းဆိုမှု; ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကျင်းပခဲ့သော Ankara မြို့တော်စည်ပင်သာယာကောင်စီ၏ဥက္ကဌ Mansur Yavaş၏ဥက္ကဌအဖြစ်ကျင်းပခဲ့သည်။ မြို့ပြမြူနီစီပယ်စည်းဝေးပွဲခန်းမနှင့်နိုင်ငံသားများ၏အလွန်စိတ်ဝင်စားမှု [ပို ... ]
Manisa သည် Manisa Metropolitan Municipality ၏လက်အောက်ခံဖြစ်သည်။ ဖွင့်လှစ်ထားသော Manisa Old Garage Open Auto Market ပထမနေ့၏အစောပိုင်းနာရီများတွင်ရာပေါင်းများစွာသောကားဝါသနာရှင်များသည်ကားဈေးကွက်သို့စုရုံးရောက်ရှိလာကြသည်။ [ပို ... ]
Mersin Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Vahap Seçerသည် Mersin တက္ကသိုလ်၊ တာရှုတက္ကသိုလ်နှင့် Toros တက္ကသိုလ်တို့ရှိကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ လူငယ်များအားဘတ်စ်ကားခကိုလိုင်ရာအဖြစ်ရွေးသည် [ပို ... ]
မြို့တော်ဝန် Ekrem Yüceက Sebahattin Zaim Boulevard မှ Serdivan ဒေသအထိအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]